အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ထဘီတန်းအောက် ဝင်ရင် ဘုန်းကံ နိမ့်တယ်/မနိမ့်ဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက် – Zartiman
Zar Ti Man | March 7, 2021 | Knowledge | No Comments
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘယ်သူကမှ ကျမ်းဂန်လာတွေကို ယုံကိုယုံရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ရှိမနေဘူးဒကာ။ ယုံခြင်းမယုံခြင်းဟာ မိမိအခွင့်အရေး၊ ယုံ ခြင်း၏ကောင်းကျိုးလည်း မိမိစံ၊ ယုံခြင်း၏ဆိုးကျိုးလည်း မိမိခံ ဒါမျှတပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ ၊ ကိုယ်ယုံတာကို သူများလည်းယုံစေလို တဲ့ အရေးအသားတွေမြင်ရမယ်။ ကိုယ်ကြည်ညိုရာကို သူများလည်း ကြည်ညိုစေလိုတဲ့ အရေးအသားတွေမြင်ရမယ် ။ ဒါဟာ အနုမာနသ ဘောလည်းဖြစ်မယ် ။ ကိုယ့်ဘာသာဝင်ကို များစေချင်တဲ့ လောဘလည်း ဖြစ်မယ် ။ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းရာသို့ အကြံပြု လိုတဲ့ မေတ္တာ လည်း ဖြစ်မယ် ။ အတ္တာဟိ အတ္တနောနာထော၊ သင်ဘယ်လိုယူမလဲ ဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲ။ ဒါသင့်အပေါ်ပဲမူတည်တယ်။
နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်ပါတယ် ၊ မနိမ့်ဘူးထင်ရင် မနိမ့်ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ထဘီကြောင့် နိမ့်တာ မဟုတ်ပဲ ” ထင် ”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန် ကြောင့်သာ နိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တာပါ။ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတ်စ တစ်ခုဟာ သင့်ကိုဘယ်လို များဒုက္ခရောက်စေမလဲ။ ဘုန်းနိမ့်တယ် ဆိုတာက သင်ထင်သလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဘုန်းနိမ့်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ negative feeling ဘက်ကိုရောက်သွား တယ်။ စိတ် အလိုမကျဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ကို နောက်ကျိစေတယ် ၊ အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ ”။ဒါဆို အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဝင်ခဲ့မိရင်ရော နိမ့်မှာလား။
အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး၊ လိုအပ်ခဲ့လို့ ဝင်ရပြီ ဆိုလည်း ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ မယူဆပါဘူး ။ ရဟန်းတစ် ပါးရဲ့ အစွမ်းအစဖြစ်တဲ့ သီလသမာဓိပညာဟာ ဒီထဘီတန်းကြောင့်တော့ ကျဆင်းစရာ မရှိပါဘူးသင်္ကန်းဟာ မြင့်မြတ်ပါသလားဘုရား သင်္ကန်းကမြင့်မြတ်တာမဟုတ်ပဲ သင်္ကန်းဝတ်ဆင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က မြင့်မြတ်နေတာပါ ဒကာ။ဘာရည်ရွယ်ချက်မို့လို့လဲဘုရား။ ရောင့်ရဲ ခြိုးခြံလိုခြင်း။တပည့်တော် ကြားဖူးတာက မိန်းမဟာ ဘုန်းကံနိမ့်တဲ့အတွက် မိန်းမ အောက်ပိုင်း ဝတ်တဲ့ ထဘီတန်းအောက်ဝင် ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ ကြားဘူးထားပါတယ်ဘုရား။ဘုန်းဆိုတာကို ရှင်းမှ ရတော့မယ်ဒကာ ၊
ဘုန်းဆိုတာအကျိုးသဘောတရားပါ။ အစွမ်းအစလည်းဖြစ်တယ်။ အားသာချက် လည်းဖြစ်တယ် ဒကာ။ အကျိုးသဘော တရားပေါ့။ ဒါဟာအကြောင်းတရား လုပ်ဆောင်ချက်ကို မူတည်ပြီး အကျိုးတရား ဘုန်းကံရယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။အလေးမခြင်း အကြောင်းဟာ သန် မာခြင်းအကျိုးကိုရမယ်။ သန်မာခြင်းဟာ ဘုန်းပဲ။ ဖော်ရွေပျူ ငှာခြင်းအကြောင်းဟာ လူချစ် လူခင်များခြင်း အကျိုးကို ရမယ်။ ဒီလူချစ် လူခင်များခြင်းဟာ ဘုန်းပဲ။ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ဘယ်အကျိုးများ ထိခိုက်စေသလဲ။ ဒကာတွေးကြည့်ပါ။ ရက် ကြာကြာဝတ်ပြီး မလျှော်ရသေးတဲ့ ထဘီဆိုရင်တော့ အနံ့အသက်ဆိုးတဲ့ ဝေဒနာကို ရချင်ရမှာပေါ့ ”။
ဘုန်းဘုန်း ခုနကပြောတယ် နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်တယ်ဆို။ဒါဟာ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ခြင်းကြောင့် နိမ့်တာမဟုတ်ဘူး နိမ့်တယ်လို့ ထင် မိတဲ့ ဥပါဒါန်အကြောင်းကြောင့်ပဲ။ စိတ်မသက်မသာ ခံစားရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါ သက်တောင့်သက်သာစိတ် ပျက်စီးသွားခြင်းပေါ့။ စိတ် သက်တောင့် သက်သာဖြစ်တာ မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်ဘုရား။မိမိပိုငဆြိုငထားသော ကောငြးသောအရာတဈခု ပကွစြီး ယုတလြွော့ခှငြးဟာ ဘုနြးနိမြ့ခှငြးပါပဲ။ရှေးအဆက်ဆက်က ဒီလိုပဲပြောလာကြတာဘုရားအရှင်ဘုရားလည်း သိမှာပါ ထဘီတန်းအောက် ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုတာ ရှေးကတည်းက အယူအဆပါ။ဗုဒ္ဓက ကာလာမသုတ်ကိုဟောတယ်။
ရှေးကပြောတဲ့စကားမို့လို့လည်း အမှန်မယူလေနဲ့တဲ့။ရှေးထုံးကပယ်သင့်သလားဘုရား။ပယ်သင့်ခြင်း မပယ်သင့်ခြင်းဟာ ရှေးထုံးတွေ ဒီ နေ့ခေတ်ထုံးတွေပေါ်မှာ မမူတည်ပါဘူး။ အမှန်အမှားပေါ်သာ မူတည်ပါတယ်။ မှန်ရင် ယူမယ် မှားရင် ပယ်မယ် ။ အမှန်အမှားကို ခွဲခြားဖို့ သင့်မှာ ဥာဏ်ရည်ရှိတယ်၊ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ် သင်တွေးကြည့်ပါ ထဘီအောက်ဝင်ရင် ဘယ်လို အစွမ်းအစမျိုး ကျဆင်း နိုင်ပါ သလဲ။မရှင်းတာတွေမေးဦးမယ်ဘုရား။မေးပါ ဒကာ။တပည့်တော် တစ်နေ့ကားစီးတော့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘေးမှာ ထိုင်ဖြစ်တယ်၊ အဖွားအို တစ်ယောက်တက်လာတော့ ကျနော်ကနေရာ ပေးတယ် အဖွားအိုက ငြင်းတယ်၊ ဘုန်းကြီးဘေးမို့ မထိုင်ရဲဘူးတဲ့ ဘုရား။
” ကားပေါ်မှာ သံဃာတော်ကို ဦးစားပေးတဲ့အယူအဆကို မှန်တယ်လို့ အရှင်ဘုရားမြင်မိလား။ထိုင်ခြင်း ထခြင်းနှစ်မျိုးမှာ ထိုင်ခြင်းက ပို သက်သာတယ်ဒကာ။ ထခြင်းဟာ ပို အားစိုက်ရတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ အင်အား နည်းပါး သူဟာ ထိုင်ဖို့ ပိုလိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် အင်အား နည်းသူကို ဦးစားပေးရမယ်။ အကယ်၍အင်အားရှိသူချင်း ယှဉ်လာရင် အိနြေ္ဒပိုထိန်းရသူကို ဦးစားပေးမယ်… ကားအလှုပ်မှာ ယိုင်ထိုးနေ မယ် ဆိုရင် အိနြေ္ဒထိပါးတယ်။ သဘောက ကလေးချော် လဲတာ ရုပ်မပျက်ပေမယ့် လူကြီးချော်လဲတော့ ရုပ်ပျက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်း မာရေးကြောင့် အင်အား နည်းသူ အသက်အရွယ်ကြောင့်အင်အားနည်းသူကို ဦးစားပေးပြီးရင်။
အိနြေ္ဒဆောင် ရဟန်းသံဃာကိုလည်း ဦးစားပေး သင့်ပါတယ်။ရဟန်းထက် ပိုဦးစားပေးရတာ ရှိတဲ့သဘောပေါ့။ အကြောင်းအရာပေါ်မူ တည်ပြီး ဗုဒ္ဓထက်ကို ပိုဦးစားပေးရတာတွေ ရှိ ပါတယ် … အားလုံးဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ တွေးရင် အဖြေထွက်ပါတယ်ဒကာ။ ဘုန်းကြီး ပုံ စံက ရှေးရိုးစွဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မူကွဲနေသလိုပဲ။ကွဲဖို့လည်း ကြိုးစားခြင်းမဟုတ်သလို တူဖို့လည်း ကြိုးစားနေခြင်း မဟုတ်ပါဒကာ။ ရှေးရိုး ကို စွဲပြီဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်လို့မခေါ်ပါဘူး။ ဘာကိုမှ စွဲနေလို့မရဘူးဒကာ။ ဘုန်းဘုန်းတို့က ထေရဝါဒဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတွင်းမှာ နာမည် တပ်ခံထားရတယ်။ ဒကာက ဘုန်းဘုန်းလို့ခေါ်တယ်။ ဒီပညတ်တွေကို အသည်း အသန် ငြင်းဆန်ဖို့မလိုလို့ ဒီအတိုင်း လက်ခံထားတယ်.။
ဇာတကဝတ္ထုတွေ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေသင်ကြားရတယ်။ဒါကို သင်ကြားရခြင်းကို ရှေးရိုးစွဲပါလို့ လာပြောလို့မရဘူး အကြောင်းအရာကို တော့ တူညီစွာသင်ခဲ့ရတယ်။ သဘောတရားကိုတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ယူပါတယ်။ မဟာဇနက တကယ် လက်ပစ်ကူးခဲ့ မကူးခဲ့ဆိုတာကို ဘုန်းကြီးမတွေးဘူး ဘာ message ပေးသလဲဆိုတာကို ဘုန်းကြီးယူတယ်။ ” မသေမချင်း အလျှော့မပေး နဲ့” ဆိုတဲ့ message …. ဝမ်းဝအောင်စားတယ်။ ခါးဝတ်ကို ရေမဝင်အောင် ဆီသုတ်တယ်။ ခါးဝတ်ကို သက်ကယ်ဘောလို လုပ်ပြီး ရှင်သန် ခွင့် ရှိသမျှ ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ မေခလာနဲ့ တွေ့တာ မတွေ့တာနောက်ထား သင်္ဘောပေါ်မှာ ဇနက အသက် အရှည်ဆုံး ပဲမဟုတ် လား။
survival ရနိုင်သမျှ ရအောင် ရှင်သန်ရဲရမယ်။သုတ္တံတွေဟာ ဥပမာဆောင်ပြီး ဟောတဲ့တရားပါ။ အီစွပ်ပုံပြင်တွေဟာ တကယ့်ဖြစ် ရပ်မ ဟုတ်သည့်တိုင် ယူစရာ message တွေရှိရဲ့မဟုတ်လားဒကာ။ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးက မဟာဇနကဇာတ်ကို တကယ်ဖြစ်ခဲ့ မဖြစ်ခဲ့ မတွေးဘူးဆိုတော့ ဒီစကား တာဝန် မကြီးဘူးလားဘုရား။တင်ပါ့ဘုရားနားလည်ပါပြီ ဘုရား။သာဓု သာဓု သာဓု။
ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ ဘယျသူကမှ ကမျြးဂနျလာတှကေို ယုံကိုယုံရမယျဆိုတဲ့ တာဝနျရှိမနဘေူးဒကာ။ ယုံခွငျးမယုံခွငျးဟာ မိမိအခှငျ့အရေး၊ ယုံ ခွငျး၏ကောငျးကြိုးလညျး မိမိစံ၊ ယုံခွငျး၏ဆိုးကြိုးလညျး မိမိခံ ဒါမြှတပါတယျ။ လလေ့ာကွညျ့ပါ ၊ ကိုယျယုံတာကို သူမြားလညျးယုံစလေို တဲ့ အရေးအသားတှမွေငျရမယျ။ ကိုယျကွညျညိုရာကို သူမြားလညျး ကွညျညိုစလေိုတဲ့ အရေးအသားတှမွေငျရမယျ ။ ဒါဟာ အနုမာနသ ဘောလညျးဖွဈမယျ ။ ကိုယျ့ဘာသာဝငျကို မြားစခေငျြတဲ့ လောဘလညျး ဖွဈမယျ ။ ဒါမှမဟုတျ ကောငျးရာသို့ အကွံပွု လိုတဲ့ မတ်ေတာ လညျး ဖွဈမယျ ။ အတ်တာဟိ အတ်တနောနာထော၊ သငျဘယျလိုယူမလဲ ဘယျလိုဆငျခွငျမလဲ။ ဒါသငျ့အပျေါပဲမူတညျတယျ။
နိမျ့တယျထငျရငျ နိမျ့ပါတယျ ၊ မနိမျ့ဘူးထငျရငျ မနိမျ့ပါဘူး ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ထဘီကွောငျ့ နိမျ့တာ မဟုတျပဲ ” ထငျ ”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါနျ ကွောငျ့သာ နိမျ့သှားတယျလို့ထငျတာပါ။ပိတျစတဈခုပဲဖွဈတဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတျစ တဈခုဟာ သငျ့ကိုဘယျလို မြားဒုက်ခရောကျစမေလဲ။ ဘုနျးနိမျ့တယျ ဆိုတာက သငျထငျသလိုမဟုတျပွနျဘူး။ ဘုနျးနိမျ့ပွီဟဲ့ဆိုတဲ့ သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြဟာ negative feeling ဘကျကိုရောကျသှား တယျ။ စိတျ အလိုမကဖြွဈစတေယျ။ စိတျကို နောကျကြိစတေယျ ၊ အဲဒါဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေးကဆြငျးခွငျး ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဘုနျးနိမျ့ခွငျးပါပဲ ”။ဒါဆို အရှငျဘုရားအနနေဲ့ ဝငျခဲ့မိရငျရော နိမျ့မှာလား။
အဓိပ်ပာယျမဲ့ ထဘီတနျးအောကျဝငျဖို့တော့ စိတျကူးမရှိပါဘူး၊ လိုအပျခဲ့လို့ ဝငျရပွီ ဆိုလညျး ဘုနျးနိမျ့တယျလို့ မယူဆပါဘူး ။ ရဟနျးတဈ ပါးရဲ့ အစှမျးအစဖွဈတဲ့ သီလသမာဓိပညာဟာ ဒီထဘီတနျးကွောငျ့တော့ ကဆြငျးစရာ မရှိပါဘူးသင်ျကနျးဟာ မွငျ့မွတျပါသလားဘုရား သင်ျကနျးကမွငျ့မွတျတာမဟုတျပဲ သင်ျကနျးဝတျဆငျရခွငျး ရညျရှယျခကျြက မွငျ့မွတျနတောပါ ဒကာ။ဘာရညျရှယျခကျြမို့လို့လဲဘုရား။ ရောငျ့ရဲ ခွိုးခွံလိုခွငျး။တပညျ့တျော ကွားဖူးတာက မိနျးမဟာ ဘုနျးကံနိမျ့တဲ့အတှကျ မိနျးမ အောကျပိုငျး ဝတျတဲ့ ထဘီတနျးအောကျဝငျ ရငျ ဘုနျးနိမျ့တယျလို့ ကွားဘူးထားပါတယျဘုရား။ဘုနျးဆိုတာကို ရှငျးမှ ရတော့မယျဒကာ ၊
ဘုနျးဆိုတာအကြိုးသဘောတရားပါ။ အစှမျးအစလညျးဖွဈတယျ။ အားသာခကျြ လညျးဖွဈတယျ ဒကာ။ အကြိုးသဘော တရားပေါ့။ ဒါဟာအကွောငျးတရား လုပျဆောငျခကျြကို မူတညျပွီး အကြိုးတရား ဘုနျးကံရယျလို့ ဖွဈလာတယျ။အလေးမခွငျး အကွောငျးဟာ သနျ မာခွငျးအကြိုးကိုရမယျ။ သနျမာခွငျးဟာ ဘုနျးပဲ။ ဖျောရှပြေူ ငှာခွငျးအကွောငျးဟာ လူခဈြ လူခငျမြားခွငျး အကြိုးကို ရမယျ။ ဒီလူခဈြ လူခငျမြားခွငျးဟာ ဘုနျးပဲ။ ထဘီတနျးအောကျဝငျခွငျး အကွောငျးကွောငျ့ ဘယျအကြိုးမြား ထိခိုကျစသေလဲ။ ဒကာတှေးကွညျ့ပါ။ ရကျ ကွာကွာဝတျပွီး မလြှျောရသေးတဲ့ ထဘီဆိုရငျတော့ အနံ့အသကျဆိုးတဲ့ ဝဒေနာကို ရခငျြရမှာပေါ့ ”။
ဘုနျးဘုနျး ခုနကပွောတယျ နိမျ့တယျထငျရငျ နိမျ့တယျဆို။ဒါဟာ ထဘီတနျးအောကျဝငျခွငျးကွောငျ့ နိမျ့တာမဟုတျဘူး နိမျ့တယျလို့ ထငျ မိတဲ့ ဥပါဒါနျအကွောငျးကွောငျ့ပဲ။ စိတျမသကျမသာ ခံစားရတယျ မဟုတျလား။ ဒါ သကျတောငျ့သကျသာစိတျ ပကျြစီးသှားခွငျးပေါ့။ စိတျ သကျတောငျ့ သကျသာဖွဈတာ မကောငျးဘူးလား။ကောငျးပါတယျဘုရား။မိမိပိုငဆွိုငထားသော ကောငွးသောအရာတဈခု ပကှစွီး ယုတလွှော့ခှငွးဟာ ဘုနွးနိမွ့ခှငွးပါပဲ။ရှေးအဆကျဆကျက ဒီလိုပဲပွောလာကွတာဘုရားအရှငျဘုရားလညျး သိမှာပါ ထဘီတနျးအောကျ ဝငျရငျ ဘုနျးနိမျ့တယျဆိုတာ ရှေးကတညျးက အယူအဆပါ။ဗုဒ်ဓက ကာလာမသုတျကိုဟောတယျ။
ရှေးကပွောတဲ့စကားမို့လို့လညျး အမှနျမယူလနေဲ့တဲ့။ရှေးထုံးကပယျသငျ့သလားဘုရား။ပယျသငျ့ခွငျး မပယျသငျ့ခွငျးဟာ ရှေးထုံးတှေ ဒီ နခေ့တျေထုံးတှပေျေါမှာ မမူတညျပါဘူး။ အမှနျအမှားပျေါသာ မူတညျပါတယျ။ မှနျရငျ ယူမယျ မှားရငျ ပယျမယျ ။ အမှနျအမှားကို ခှဲခွားဖို့ သငျ့မှာ ဥာဏျရညျရှိတယျ၊ ဆငျခွငျနိုငျစှမျးလညျးရှိတယျ သငျတှေးကွညျ့ပါ ထဘီအောကျဝငျရငျ ဘယျလို အစှမျးအစမြိုး ကဆြငျး နိုငျပါ သလဲ။မရှငျးတာတှမေေးဦးမယျဘုရား။မေးပါ ဒကာ။တပညျ့တျော တဈနကေ့ားစီးတော့ ဘုနျးကွီးတဈပါးဘေးမှာ ထိုငျဖွဈတယျ၊ အဖှားအို တဈယောကျတကျလာတော့ ကနြျောကနရော ပေးတယျ အဖှားအိုက ငွငျးတယျ၊ ဘုနျးကွီးဘေးမို့ မထိုငျရဲဘူးတဲ့ ဘုရား။
” ကားပျေါမှာ သံဃာတျောကို ဦးစားပေးတဲ့အယူအဆကို မှနျတယျလို့ အရှငျဘုရားမွငျမိလား။ထိုငျခွငျး ထခွငျးနှဈမြိုးမှာ ထိုငျခွငျးက ပို သကျသာတယျဒကာ။ ထခွငျးဟာ ပို အားစိုကျရတယျ။ ဒီလိုဆိုတော့ အငျအား နညျးပါး သူဟာ ထိုငျဖို့ ပိုလိုအပျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အငျအား နညျးသူကို ဦးစားပေးရမယျ။ အကယျ၍အငျအားရှိသူခငျြး ယှဉျလာရငျ အိနွေ်ဒပိုထိနျးရသူကို ဦးစားပေးမယျ… ကားအလှုပျမှာ ယိုငျထိုးနေ မယျ ဆိုရငျ အိနွေ်ဒထိပါးတယျ။ သဘောက ကလေးခြျော လဲတာ ရုပျမပကျြပမေယျ့ လူကွီးခြျောလဲတော့ ရုပျပကျြတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနျြး မာရေးကွောငျ့ အငျအား နညျးသူ အသကျအရှယျကွောငျ့အငျအားနညျးသူကို ဦးစားပေးပွီးရငျ။
အိနွေ်ဒဆောငျ ရဟနျးသံဃာကိုလညျး ဦးစားပေး သငျ့ပါတယျ။ရဟနျးထကျ ပိုဦးစားပေးရတာ ရှိတဲ့သဘောပေါ့။ အကွောငျးအရာပျေါမူ တညျပွီး ဗုဒ်ဓထကျကို ပိုဦးစားပေးရတာတှေ ရှိ ပါတယျ … အားလုံးဟာ ဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ တှေးရငျ အဖွထှေကျပါတယျဒကာ။ ဘုနျးကွီး ပုံ စံက ရှေးရိုးစှဲ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ မူကှဲနသေလိုပဲ။ကှဲဖို့လညျး ကွိုးစားခွငျးမဟုတျသလို တူဖို့လညျး ကွိုးစားနခွေငျး မဟုတျပါဒကာ။ ရှေးရိုး ကို စှဲပွီဆိုရငျ ဗုဒ်ဓဘာသာရယျလို့မချေါပါဘူး။ ဘာကိုမှ စှဲနလေို့မရဘူးဒကာ။ ဘုနျးဘုနျးတို့က ထရေဝါဒဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအတှငျးမှာ နာမညျ တပျခံထားရတယျ။ ဒကာက ဘုနျးဘုနျးလို့ချေါတယျ။ ဒီပညတျတှကေို အသညျး အသနျ ငွငျးဆနျဖို့မလိုလို့ ဒီအတိုငျး လကျခံထားတယျ.။
ဇာတကဝတ်ထုတှေ ဇာတျကွီးဆယျဘှဲ့တှသေငျကွားရတယျ။ဒါကို သငျကွားရခွငျးကို ရှေးရိုးစှဲပါလို့ လာပွောလို့မရဘူး အကွောငျးအရာကို တော့ တူညီစှာသငျခဲ့ရတယျ။ သဘောတရားကိုတော့ တဈဦးတဈယောကျခငျြးစီရဲ့ ဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ ယူပါတယျ။ မဟာဇနက တကယျ လကျပဈကူးခဲ့ မကူးခဲ့ဆိုတာကို ဘုနျးကွီးမတှေးဘူး ဘာ message ပေးသလဲဆိုတာကို ဘုနျးကွီးယူတယျ။ ” မသမေခငျြး အလြှော့မပေး နဲ့” ဆိုတဲ့ message …. ဝမျးဝအောငျစားတယျ။ ခါးဝတျကို ရမေဝငျအောငျ ဆီသုတျတယျ။ ခါးဝတျကို သကျကယျဘောလို လုပျပွီး ရှငျသနျ ခှငျ့ ရှိသမြှ ရှငျသနျဖို့ ကွိုးစားတယျ။ မခေလာနဲ့ တှတေ့ာ မတှတေ့ာနောကျထား သင်ျဘောပျေါမှာ ဇနက အသကျ အရှညျဆုံး ပဲမဟုတျ လား။
survival ရနိုငျသမြှ ရအောငျ ရှငျသနျရဲရမယျ။သုတ်တံတှဟော ဥပမာဆောငျပွီး ဟောတဲ့တရားပါ။ အီစှပျပုံပွငျတှဟော တကယျ့ဖွဈ ရပျမ ဟုတျသညျ့တိုငျ ယူစရာ message တှရှေိရဲ့မဟုတျလားဒကာ။ဗုဒ်ဓဘာသာဘုနျးကွီးတဈပါးက မဟာဇနကဇာတျကို တကယျဖွဈခဲ့ မဖွဈခဲ့ မတှေးဘူးဆိုတော့ ဒီစကား တာဝနျ မကွီးဘူးလားဘုရား။တငျပါ့ဘုရားနားလညျပါပွီ ဘုရား။သာဓု သာဓု သာဓု။